काठमाडौ । नेपालमा पनि को’रोनाको दोस्रो लहरले महाा’मारीकै रुप लिएको अ’वस्थालाई लिएर चिनिया अधिकारीहरु पनि चिन्तित छन् । चिनसंगको सिमानामा को’रोना महामा’रीको अ’वस्थाका बारेमा उनीहरुले चासो राखेका थिए । बिहीबार दिउँसो रसुवाको रसुवागढी नाकामा नेपाल चीनका अधिकारीहरुबीच कुराकानी भएको छ । रसुवागढी नाकामा रहेको मितेरी पुलमा दुबै देशका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै एक अर्कासंग कुराकानी गरेका छन् ।
दुई पक्षबीच झन्डै डेढ घन्टा कुराकानी भएकोर उनीहरुले रसुवामा कोरोनाको अवस्था के छ ? नाकामा आउने चालकहरूले को’रोना खो’प लगाएका छन् कि छैनन् ? जस्ता कुराहरूका बारेमा जिज्ञासा राखेको प्रजिअ ढकालले बताए ।
Published April 30, 2021 By Desk